Astaanta Lix-geeslay “The David Star” - Land Of Punt
Astaanta lix geeslayda ee looyaqaan “The David Star” yahuudi maleh. Lakinse, yahuuda ayey ku shaanbadaysan tahay oo loo nisbeeya meelkasto oo aad ku aragtid astaanta lix geeslayda markiiba maankaaga waxaa ku soo dhacaya yahuuda “Torah” iyo xukumada Isreal. Astaantan waxaad ku dhex arkay calanka xukumada Isreal waxaana laga dhigay oo loo aqoonsanyahay astaan matasha qoomiyadaas. Astaanta “David Star” waxay ka kooban tahay laba sadex-geeslay oo lays waydaariyey oo noqonay lix geeslay. Astaantan lix geeslayda ma aha mid dunida ku cusub oo la dhalatay Isreal ama qoomiyada yahuuda lakinse waa astaan soo jireen ah ilaa 1700 “BC” dhalashadii nabi Ciise ka hor waa la hayey.
Intaan astaanta lix geeslayda yahuudu sheegan waxaa ka horeeyey oo ay astaan u ahayd khuraafadlayashi “Pagans” sanabada badan caabudi jiray intaan lasoo dejin diimaha samaawiga ah. Tusaale waxaynu kusoo qaadan karnaa oo astaantan ka hor laga yaqaanay hinduuga “Hinduism” iyo niman loo nisbeeyo inay yaqaanen cilmiga sixirka oo kunoola isla qaarada eeshiya.
Astaanta lixda gees leh waxaa laga yaqaanay bariga yurub halkaas oo ay kunoolayen qabaa’il cawaan ah oo tarikhda dunida kaga jira baal madow reer Yajuuj “The Gothics” ayaa isticmaali jirey astaantan. Reer Yajuuj waxay ka aminsanaayen astaanta lixda geeleh in lagusoo xaadiriyo Jinn kooda waa weyn “Cifriid” oo ay uyaqaanen “Trud”. Jinnka “Trud” waxay soo kicinjireen marka arimo waa weyn ay galayaan bay soo xadirin jireen. Sidaa si’lamid ah waxaa iyaguna astaantan yaqaaney qoomikii Nimruud oo u nisbayn jiray ilaaha Baal (macalinkii Nimruud) inay tahay calaamdisa gaar ka ah, waxayna adeegsan jireen wakhtiyada galmada si’ay iyagoo burji wax lahalmaala ka dhex raadinaya lix geeslayda. Astaan lix geeslaydu waxay ka turjumay lab (sadex- geeslay kor eegay) iyo dhedig (sadex geeslay hoos eegay) oo midoobay, marka labada awoodod ee kala gedisn waxaad gaadhay dheelitir nololeed.
Tarikhyanka cilmiga “SYMBOLISM” ee takhasuska uleh turjumada calaamadaha waxay inoo sheegayaan in lix geesleyda ay yahuuda kasoo gashay dhinaca mesobatoomiya wakhtigii uu boqorkii Siiriyus kasoo furtay Nimruud yahuuda ee ay kusoo laabten dhulka barakaysan “Ardul Sham”. Astaanta waxay kala yimaaden qoomka Nimruud inbadan ayey dhex socotay oo yahuudu isticmaalayen heer markii danbe yidhaahdan in lix geeslaydu samada uga timi oo ay la socotay anbiyadii kasoo jeeday qoomkooda. Waxay iska dhaadhiciyeen oo aamineen in astaantan uu leeyahay nabi Daud oo isna ku wareejiyey inankiisi nabi Suleiman (Magen David, King Solomon’s seal) oo ay shaanbad u ahayd.
Xiligan danbe ee yahuudu talinay waxaa astaanta lix geeslayda soo celiyey ururka saynuuniyiinta waxaan ku khasbay in “David Star” laga dhigo astaanta lagusoo sooco yahuuda ninka qabeenka ah ee reerkodu dunida ugu lacagta badanyihiin ee Rotchild.
astaanta yahuuda calaamada yahuuda David star isreal lix geeslay masaajidka nabi suleymaan saynuuniyiinta symbolism ururada hadafka qarsoon leh